‘नेकपा विभाजनमा ओली र प्रचण्ड बराबर दोषी छन्’
- बामदेव गाैतम
नेकपाको हैसियतले नेपाललाई मात्र होइन, संसारलाई तरंगित गरेको थियो । निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेर झण्डै दुई तिहाइका साथ सरकार बनाएको नेकपा विभाजित भएको छ ।
अहिले दुई वटा समूह निर्माण भएका छन् । एउटा केपी ओलीको नेतृत्वमा, अर्काे प्रचण्डको । यो दुई समूहका नेताहरू नेकपाका दुई अध्यक्ष हुनुहुथ्यो । आज उहाँहरू त्यो दुई पार्टीका दुई वटा समूहका नेता हुनुभएको छ । उहाँहरूले पार्टीलाई चिराचिरा पार्न खोज्नुभएको छ । जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले निर्वाचनमा गएर बहुमत ल्याएरै छाड्छौँ भन्नुभएको छ । प्रचण्ड-नेपाल समूहले निर्वाचन हुनै दिन्नौँ, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र दुई वर्षपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । दुई वर्षपछि हुने निर्वाचनमा पनि हामीले नै बहुमत प्राप्त गर्छाैं भन्नुभएको छ ।
बैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुने हो भने पनि हामीले बहुमत प्राप्त गर्छौं भन्ने प्रधानमन्त्री ओली समूह र दुई वर्षपछि निर्वाचन भयो भने हामीले बहुमत हासिल गर्छाैं भन्ने प्रचण्डको समूह । मैले थोरै हिसाबकिताब गरेको छु । गएको निर्वाचनमा एउटा ठूलो लहर आएको थियो नेकपाको पक्षमा । जनतामा लहर आएको थियो तर हामी पार्टी एकता नगरी चुनावमा गएका थियौं । दुई वटा पार्टी मिलेर गएको चुनावमा हामीले प्राप्त गरेको जम्मा ४३ लाख हो ।
नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको मत ३० लाख हो । अहिलेसम्म ५-७ लाख मतदाता बढे होलान् । तर, बढ्ने जो अनुपात हुन्छ त्यो सरदर बराबरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गरेको भोट बाँडिने हो भने कति हुन्छ ? साढे २१ लाख हुन्छ । २२ लाखमात्रै कसैले प्राप्त गर्‍यो भने पनि हामीलाई पछि पार्दिन्छ ।
तर, दुई पार्टी मिलेर चुनाव लड्दा पनि कांग्रेसले प्राप्त गरेको मत ३० लाख छ । त्यस्तो अवस्थामा हामी पराजित हुनुको अर्काे विकल्पै छैन । २-४ ठाउँमा जित्न सकिएला । साढे तीन वर्ष पहिले भएको निर्वाचनमा हामीले प्राप्त गरेको मत विभाजित हुने पक्का छ । दुई पार्टी फुटेर पराजित भएपछि त्यसको बीचबाट उठेको अर्काे पार्टी सरकारमा पुग्ने कुरा पक्का छ । तर, हाम्रा नेताहरू फुटेर पनि एक्लै बहुमत ल्याउछौँ भन्नुभएको छ, त्यो सिद्धान्तले गलत सावित गर्छ ।
फुटेर पनि बहुमत प्राप्त गर्छु भनेर मैले पनि चार वर्ष भाषण गर्दै हिँडेको थिएँ । फुटेर प्राप्त गर्ने शक्ति त्यसबेला तपाईंले देख्नुभयो । मैले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा मालेले देशभर एक सिट पनि जित्न सकेन ।
तर, मलाई के विश्वास छ भने सर्वाेच्चमा परेको मुद्दा फैसला हुँदा बित्तिकै ओलीको समूहबाट पनि धेरै साथीहरू आउनु हुनेछ मिसिन र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका साथीहरू पनि यो अभियानमा मिसिन आउनुहुनेछ ।
धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ- सर्वाेच्च अदालतको निर्णय पर्खिदिनुस् । मलाई विश्वास छ- प्रचण्डको नेतृत्वमा भएकामध्ये केहीलाई छाडेर ठूलो पंक्ति एकताको पक्षमा छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको समूहमा पनि उहाँबाहेक सम्भवतः सबै एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा यो पार्टी विभाजन भएको छ ।
आज जसले फुटाउन मद्दत गरिरहनुभएको छ, भोलि जुटाउन नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आउनेछन् । मैले त्यो विश्वास बोकेर अघि बढेको छु । एकथरिले के प्रचार गरिरहेका छन् भने यो निश्चय पनि केपी ओलीतिर जान्छ । किनभने राम्रो कुरा गरेर फसाउन सक्ने केपी ओलीबाहेक कोही छैन । र, बामदेवलाई फसाउन सजिलै छ ।
पटक-पटक फसाउनु भएको छ, फेरि एकपटक फसाइदिनुहुन्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद साइनबोर्ड ल्याएर राख्नुभएको छ उहाँले । जनताको बहुदलीय जनवाद भनेपछि बामदेवले हुरुक्कै गर्छ । त्यो त्यतातिरै जान्छ भनेर उहाँहरूले प्रचार गरिरहनुभएको छ ।
कतिपयले के भनेका छन् भने बामदेवले बाहिर भनेको हो, भित्र-भित्र त पार्टी अध्यक्ष जसले दिन्छ त्यतै लाग्छु भनेको छ । प्रचार पनि भएको छ । मलाई एकपटक ओलीले तपाईं पार्टीमा आउनुस् भन्नुभयो । मैले भने, 'यदि तपाईंले अध्यक्ष पद छाड्नुहुन्छ र तपाईं वरिष्ठ नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्नुस् र म अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्छु । सँगै पार्टी एकताका लागि कार्यदल बनाउने र त्यो कार्यदलको प्रमुख पनि म हुनुपर्छ, त्यसमा तपाईंले कुनै बाधा अड्चन गर्न पाउनुहुन्न । त्यसो हो भने म आउँछु भनेर भनेँ ।' यही विषयलाई चर्चामा ल्याइयो बामदेव जतातिर अध्यक्ष दिन्छन्, त्यतैतिर जान्छ ।
हामीले २०४७ सालमा पनि पार्टी एकता गर्‍यौं । तर, त्यसबेलाको पार्टी एकतामा हामीले दुई अध्यक्ष बनाएनौं । दुई वटा महासचिवमा गएनौं । एउटा मानार्थ अध्यक्ष र एउटा कार्यकारी महासचिवको प्रणालीमा हामी गयौं । तर, यसपटक हामी दुई अध्यक्षमा लग्यौं जसले गर्दा नेतृत्वको केन्द्र दुई ठाउँमा भयो । त्यसले मेलमिलाप हुँदासम्म त्यो ठीक ढंगले चल्छ ।
पोहोर साल मंसिर ४ गते एउटा घटना घट्यो हाम्रोमा । हामीले धेरै लडाइँ गरेर प्रचण्डको अध्यक्ष अगाडि कार्यकारी थपिदियौं । हामी त्यो लडाइँमा विजयी भयौं । अन्तरपार्टी संघर्षमा हामीले प्राप्त गरेको एउटा सफलता थियो । त्यसबेला प्रचण्ड बहुत खुसी हुनुभयो । अनि प्रचण्डले भनिदिनुभयो- दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको छु, मलाई फेरि प्रधानमन्त्री चाहिएको छैन । मैले कार्यकारी भएर कार्म गर्न पाएपछि एकताको बेलामा गरेको आलोपालोको सहमति, त्यो मैले परित्याग गरेँ ।’
केपीजीले तुरुन्तै महासचिवलाई यो पनि निर्णय गरिहाल्नुस्, लेखिहाल्नुस् भनेर भन्नुभयो । आजको विभाजनको सुरूवात त्यसैबेलादेखि भयो । प्रचण्डले पार्टीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आलोपालो नै हो, जुन दिन प्रचण्डले त्यो आलोपालो छाड्नुभयो हामी सबै खुट्टा कमाएर त्यही बसिराख्यौं । लडाइँ हामीले लडेका थियौं, कार्यकारी हामीले ल्याएका थियौं, उहाँले छाडिदिनुभयो ।
त्यसपछि हामीले यो विभाजनलाई रोक्न सकेनौं । मैले पनि प्रचण्डलाई आलोपालो छाड्नबाट रोक्नुपर्थ्यो तर रोक्न सकिनँ । क्रियाकलाप पनि हामीलाई जुटाउने भन्दा पनि फुटाउनेतिर गए । र, आखिरमा ५ पुस मा एउटाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र विकल्पमा अर्काे प्रधानमन्त्री हुने, अर्काेले तिमीले बहुमत पुर्‍याएर सबथोक गर्दैछौँ मलाई थाहा छ ।
अब त्यो सबै गर्न नपाउने गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिन्छु भनेर अनेक पटक सांकेतिक भाषामा उहाँले भनिरहनुभएको थियो । ५ पुसमा उहाँले प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिनुभयो । तराजुमा जोखेर हेर्दा कसको गल्ती बढी, कसको कम भनेर हिसाब गर्दा ओली र प्रचण्ड दुवैको बराबर दोष देख्छु पार्टी विभाजनको सवालमा ।
फुटाउनकै लागि अविश्वासको प्रस्ताव अघि सारियो । फुटे फुट्छ भनेर प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । प्रतिनिधिसभा भंग नगरी राष्ट्रपतिकोमा जानुहुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो केपी ओलीको सान ? केपी ओलीको प्रतिष्ठा कति उठ्ने थियो ? यस्तो अवस्थामा मैले राजीनामा गरेर यो पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर सोच्नु पर्दैनथ्यो उहाँले ?
बामदेवले अर्काे पार्टी बनाउँदैछ भन्ने सन्देश पनि गएको छ । संगठित सदस्यहरूलाई संगठित बनाइराख्न संगठनको आवश्यकता पर्छ । हामी कम्युनिस्ट हौं । हामी संगठित भएर मात्रै हाम्रो सदस्यता रहन्छ । संगठनमा आबद्ध भएनौं भने कम्युनिस्ट भइँदैन ।
सर्वाेच्च अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ, के गर्ला त्यसले ? कति साथीहरूले भन्नुभएको छ- सर्वाेच्चको निर्णय पर्खनुस् न । कतिपय साथीहरूले यो संगठन निर्माण नगर्नुस् भन्नुभयो । नगरेको भए यो सबै विषय तपाईंहरूले सुन्नै पाउनु हुने थिएन ।
संसद पुनर्स्थापना भयो भने हामीलाई दुई वर्ष समय प्राप्त हुन्छ । यो दुई वर्षमा दुवै समूहलाई म ल्याउँछु । केपी ओली कहिल्यै पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । म हुँदा प्रचण्डजी एकताको पक्षमा हो । अहिले उहाँहरू दुईतिर फर्कनुभएको छ । म जान्छु र केपी ओलीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु, प्रचण्डलाई केपी ओलीतिर फर्काइदिन्छु । त्यो तागत नेपाली जनताले हामीलाई दिन्छन् ।
संविधानका धारा उपधारा स्पष्ट छैनन् भने त्यसको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई छ । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासलाई छ । त्यो संवैधानिक इजलासमा यो सबै विषयहरू पुगेका छन् । उनीहरूले जे भन्छन् त्यो संविधानसम्मत छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ । किनकि अदालतले गरेको व्याख्या कसैले उल्लंघन र विरोध गर्न पाउँदैन । हामी त्यसलाई शिरोधार्य गर्छाैं किनकि हामी जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्नेवाला हौं । मेरो आफ्नो धारणा पार्टी एकता गराउन सकिन्छ भन्ने भएकाले संसद पुनर्स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।
(नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा कार्यक्रममा नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १४, २०७७, १७:५३:००